ခရစ္စမတ် နီးချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ အမှတ်တရ နေရာဖြစ်သည့် 'ရိဒ်' ရေကန်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည်?? - Yangon Media Group
ခရစ္စမတ် နီးချိန်တွင် ချင်းပြည်နယ်၏ အမှတ်တရ နေရာဖြစ်သည့် ‘ရိဒ်’ ရေကန်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည်??
ချင်းပြည် နယ်၏အမှတ်တရနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်များစုပေါင်းနေထိုင်ရာ နေရာတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိရာ ရိဒ်ရေကန်သို့ ဒီဇင်ဘာလဆန်းချိန်မှအစပြု၍ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည်များနေ့စဉ်မပြတ်လာ ရောက်လျက်ရှိနေကြောင်း ရိဒ်ရေကန်၌ ဧည့်သည်များသွားလာရေးနှင့်နေထိုင်ရေးလမ်းညွှန်ဆောင် ရွက်ပေးနေသူ ဦးသန်းညွန့်က ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
”မိုးရာသီတစ်လျှောက်လုံး ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ဖြစ်တဲ့ ရိဒ်-တီးတိန်-ကလေးလမ်း ကမကောင်းတဲ့အတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးဘက်ကလာတဲ့ပြည်တွင်း ပြည်ပခရီးသည်ဝင်ရောက်မှုနည်းတယ်။ မိုးရာသီမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ဘက်ကလာကြတဲ့ ပြည်ပဧည့် သည်တွေများတယ်။ အခုဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေးဘက်ကလာတဲ့ဧည့်တွေအလာများတယ်”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြော ကြားသည်။
ရိဒ်ရေကန်သို့ ပြည်တွင်းမှ အဓိကဝင်ထွက်သွားလာရာလမ်း ကြောင်းဖြစ်သည့် ကလေး-တီးတိန်- ရိဒ်လမ်းကြောင်းတွင် မိုးတွင်းကာ လတစ်လျှောက်လုံး တီးတိန်-ရိဒ်အကြားရှိ ဟိုင်မွာလ်ရွာဟောင်းနှင့် ရွာသစ်အကြားလမ်းမှာ ဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့မှုကြောင့် ယခုပွင့်လင်း ရာသီတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ချင်းပြည်နယ်ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးမှ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းများအရ ချင်းပြည်နယ်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုအခြေအနေမှာ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည် ၁၄၉၁၁ ဦး၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပဧည့်သည် ၁၆၄၈၆ ဦးဝင် ရောက်ခဲ့ပြီး ယခု ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မိုး ကုန်ရာသီ အောက်တိုဘာလအထိ ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်တစ် သောင်းကျော် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်းတွင် ကားမောင်းပြိုင်ကြသည့် အဖွဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လေ့လာ??
ဆီ သိုလှောင်ကန် ဆိပ်ကမ်း သီးခြားမရှိ၍ ရွှေကြက်ယက်အနီး ဆီအတင်အချ ဆိပ်ကမ်း၌ ဆီသယ်ယာဉ်များဖြင??
အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သန်းရွှေ၏ လမ်းညွှန်မှုကို မခံယူခဲ့ဟု ငြင်းဆို
ဂျပ်စတင်ဘီဘာနှင့် ဟေလီဘော်လ်ဒွင်တို့ စုံတွဲ ဟေလီမိသားစုထံ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့
အပူရှိန်ကြောင့် သတိလစ် မေ့မြောသွားသည့် Heat Stroke လူနာများ အရေးပေါ် ကုသပေးနိုင်ရန် ရန်ကုန်ပြည်သူ??